वागेश्वरी एकेडेमी कोहलपुर र ए.वि.सी कलेज नेपालगञ्ज सेमिफाईनल – Vision Khabar
वागेश्वरी एकेडेमी कोहलपुर र ए.वि.सी कलेज नेपालगञ्ज सेमिफाईनल
। २८ मंसिर २०७४, बिहीबार १९:१२ मा प्रकाशित
बाँके । कोहलपुरमा जारी बुम अन्तर क्याम्पस क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत वागेश्वरी एकेडेमी कोहलपुर र ए.वि.सी कलेज नेपालगञ्ज सेमिफाईनल चरणमा प्रवेश गरेका छन ।
प्रतियोगिताको बिहिबार सम्पन्न खेलमा ब्राईटल्याण्ड कलेज नेपालगञ्जलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै वागेश्वरी एकेडेमीले सेमिफाईनल चरणको यात्रा तय गरेको हो । त्यसैगरी दोस्रो खेलमा होप कलेज नेपालगञ्जलाई २७ रनले पराजित गरेको ए.वि.सी. कलेजले पनि सेमिफाईनल चरणमा प्रवेश पाएको छ ।
पहिलो खेलमा टस जितेर मैदानमा उत्रिएको ब्राईटल्याण्ड कलेजले १३ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ५३ रन जोडेको थियो । सस्तैमा समेटिएको ब्राईटल्याण्डको लागि शेर बहादुर वलीले १७ रन जोडेपनि अन्य खेलाडीहरुले दोहोरो अंश जोड्न सकेनन् । ब्राईटल्याण्डको ब्याटिङ लाईन धारासायी बनाउने क्रममा वागेश्वरीका बलहरु अजय शहानी र भुवेश थापाले ३/३ विकेट लिएका थिए भने कप्तान नितेष विष्टले २ विकेट लिएका थिए ।
५४ रनको झिनो लक्ष्य पछ्याएको वागेश्वरीले २ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य हालिस गर्न सफल भएको थियो । वागेश्वरीकालागि अजय शहानिले अविजित १९ रन जोडेका थिए भने शिव डाँगी र भुवेश थापाले समान १२/१२ रन जोड्न सफल भएका थिए ।
बिहिबार नै सम्पन्न दोस्रो खेलमा होप कलेजलाई २७ रन अन्तरले पराजित गर्दै ए.वि.सी. कलेज सेमिफाईनल चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका वागेश्वरी एकेडेमीका
अजय शहानी र ए.वि.सी. कलेजका अफजल पठान म्यान अफ द म्याच घोषित गरिएको थियो ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत भाेली मोर्डन कलेज र जि.भि.एन. कलेज नेपालगञ्जले प्रतिस्प्रर्धा गर्ने प्रतियोगिता आयोजक क्लबले जनाएको छ ।